အိမ်ထောင်သက် ၂ လမပြည့်ခင် ကွာရှင်းပြတ်ဆဲပြီးကြောင်း ဆိုလာတဲ့ မျိုးကျော့မြိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အိမ်ထောင်သက် ၂ လမပြည့်ခင် ကွာရှင်းပြတ်ဆဲပြီးကြောင်း ဆိုလာတဲ့ မျိုးကျော့မြိုင်
အိမ်ထောင်သက် ၂ လမပြည့်ခင် ကွာရှင်းပြတ်ဆဲပြီးကြောင်း ဆိုလာတဲ့ မျိုးကျော့မြိုင်
Posted by intro on Jul 15, 2010 in News | 12 comments
Myanmar Popular Singer, Myo Kyaw Myaing and Dr. Thwin Pa Pa Aung officially ended their marriage on (24) June, 2010 and Myo Kyawt Myaing made official announcement about their divorce on state run newspaper. Myo Kyawt Myaing and Thwin Pa Pa Aung held their wedding dinner party last two months ago (on 29 April) at Yuzana Garden Hotel, Yangon. They got divorced after only two months of marriage.
အဆိုတော် မျိုးကျော့မြိုင်က ပူပူနွေးနွေး ဇနီးသည် သွင်ပပအောင်နဲ့ ဇွန်လ (၂၄) ရက်နေ့က နှစ်ဦးသဘောတူ ကွာရှင်းပြတ်ဆဲ ပြီးကြောင်းကို သတင်းစာမှာ ထည့်သွင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ မျိုးကျော့မြိုင်နဲ့ သွင်ပပအောင်တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ (၂၉) ရက်နေ့ကမှ Yuzana Garden Hotel မှာ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အိမ်ထောင်သက် ရက် (၆၀) မပြည့်သေးခင် ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခဲ့ကြတာပါ။
အံ့သြစရာပဲနော် အစက ဘာလို့ ကြိုမတွေးကြလဲမသိဘူး ။
ဒေါက်တာ သွင်ပပအောင် က ယောကျားယူတာများ ဟင်းရွက် ကန်စွန်းရွက် ၀ယ်တယ်များ မှတ်နေလားမသိပါဘူးနော် နစ်နာစရာရှိရင် သူပဲနစ်နာမှာ ဒါကို သေသေချာချာ စဉ်းစားသင့်တယ်
ဟိုကောင်က ဘယ်လို အရူးလဲဆိုတာ ပေါင်းကြည့်မှ သိလို့နေမှပေါ့။
ယူတာတောင် မသိဘူး ကွဲမှဘဲ သိတော့တယ်။ အသက် ၃၀ကျော် ၄၀ နီးပါးအထိ လူပျိုကြီး လုပ်လာတာ ဆိုတော့ သေချာတယ် တခုခုတော့ သူမှာ အားနည်းချက်ရှိလို့ဖြစ်မယ် လူတွေက တယောက်ထဲ နေတာ များရင် တကိုယ်ကောင်း ဆန်တတ်လာ ကြတာဘဲ သူများ အတွက် သိပ်မတွေးတော့ဘူး အဲလိုမျိုး ကိစ္စတွေ ရှိလို့လည်း နေမှာပေါ့။ သီချင်းထဲမှာ ကိုက လူမသိသူမသိတွေကလည်း အများ သားဆိုလား ပါသေးတယ်လေ။ ဇတ်လမ်းရှုပ်တွေ ပြသနာရှိလို့လည်း ဖြစ်နိုင်တာဘဲ။
အော် ကို cum min ရယ် ခုမှသနားနေ..
ဟိုကဖြင့် နောက်အိမ်ထောင်တွေ နဲ့ ကလေးတွေတောင် ရနေလောက်ပီ …
အတိတ်ကို အတိတ်မှာပဲ ထားရမယ့် ပိုစ်တွေကို ပြန်ပြီး နောက်ကြောင်းမလှည့် သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် …
မဂျူးရေ … သူ့ကိုပြောလည်း အပိုပဲ … ။
ဘာမှန်းကို မသိဘူး ပို့စ်အဟောင်းတွေ ခဏခဏ ပြန်ဖွပြီး ..သတင်းလုပ်နေတာ အာရုံနောက်တယ် ။
ဘာတွေလဲဗျာ၊ သူတို.ဘဲယူ၊ သူတို.ဘဲကွာ၊ သစ္စာတရားဆိုတာမှရှိသေးရဲ.လား၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ပြောင်းရတာကို အရသာတွေ.နေတာလား?